I-Wi-Fi 7 iyasondela futhi iyasondela futhi i-Intel ibalula ukuthi izobaluleka | Kusuka kuLinux
Namanje imboni noma iningi labahlinzeki be-inthanethi emhlabeni abalisebenzisanga i-Wi-Fi 6 kanti i-Wi-Fi 7 isivele ingqongqoza emnyango ukuze umake izizukulwane ezintsha ze-Wi-Fi ezizothatha ukuxhumana ziye ezingeni elilandelayo. Isizukulwane esilandelayo sezinga le-Wi-Fi yi-Wi-Fi 7 futhi i-Intel isethula njengokufanele ube nakho.
Lapho kwenziwa indinganiso yezimboni, ukuthola isisombululo esamukelekayo kubalulekile. Okokuqala, i-Wi-Fi Alliance ithathe indlela entsha yokuqamba igama. Lokhu kunikeza abasebenzisi imigomo ekulula ukuyiqonda yobuchwepheshe be-Wi-Fi obusekelwa amadivayisi nokuwaxhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi.
Cishe amashumi amabili eminyaka, abasebenzisi be-Wi-Fi kudingeke ukuthi babhekane nezinhlangano ezinzima zokuqamba amagama ezobuchwepheshe ukunquma ukuthi amadivayisi wabo asekela izinhlobo zakamuva ze-Wi-Fi. Manje, uhlelo lokuqamba amagama lwenziwe lula ngoba izizukulwane ze-Wi-Fi zibalwa ngokwezinga lokuthuthuka elibaluleke kakhulu.
Lokhu kunika amandla amabhizinisi nabahlinzeki bezinsizakalo ukweseka izinhlelo ezintsha nezisaqhamuka kwingqalasizinda efanayo yendawo engenazintambo (WLAN) ngenkathi behlinzeka ngezinga eliphezulu lenkonzo kunezicelo ezindala.
I-5G iyisevisi yeselula kanti i-Wi-Fi 7 ubuchwepheshe bokufinyelela obungenazintambo obunqamulelayo. I-Wi-Fi 7 entsha yabelana ngezici ze-5G, kufaka phakathi ukusebenza okuthuthukisiwe.
Nge-Wi-Fi 6, i-Wi-Fi Alliance yethule ukuphepha okungcono nge-WPA3, okwakamuva nokukhulu ekuphepheni kwe-Wi-Fi. Nokuthuthuka okukhulu kakhulu ekubambeni kwesikhathi, ukuthuthuka okungafika ku-75% ku-latency. I-Wi-Fi 6, ngakho-ke, ubuchwepheshe, ngokwabo, obuletha ukuthuthuka okukhulu ngaphezu kwezizukulwane ezedlule.
I-Wi-Fi 6 ihlinzeka ngokuqina okuphindwe kane ngobuchwepheshe obusha obuzungeze i-OFDMA nokuphathwa okungcono kokuphazamiseka, ikakhulukazi, sisebenzisa amandla amaningi ukwenza ukufinyelela okuhleliwe okuningi futhi ngaleyo ndlela kube yiQoS engcono.
Nge-Wi-Fi 7 kuzoba namandla amaningi nokuxhaswa kuze kufike ku-7 gigahertz nakumabhendi aphansi lapho umsebenzisi angaba nezinhlelo zokusebenza ze-IoT (Internet of Things) ezinjengezinzwa ezidinga umkhawulokudonsa omncane. Ngakho-ke lolu uhlobo oluhluke ngokuphelele lokusetshenziswa okusha kwe-Wi-Fi.
Ngokuthuthuka kokubambezeleka, kuzokwenza inethiwekhi inqume ngokwengeziwe, kanye nokubambezeleka okwengeziwe onakho, inethiwekhi ingabikezela kakhulu futhi lokho kubaluleke kakhulu ezinhlelweni eziningi zezimboni.
Ukuthuthukiswa kwe- I-Wi-Fi 7 iyasebenza futhi ingathatha eminye iminyaka emihlanu, ngakho-ke okungenani u-2024 ngeke abone noma yimuphi umkhiqizo wezohwebo ngonyaka ozayo nge-Wi-Fi 7, kepha kuyinto okufanele uyikhumbule ukuze ubone ukuthi umbono unjani nokuthi hlobo luni lwezinguquko okufanele silulindele.
Izici ze-Wi-Fi 7 namakhono asathuthuka njengengxenye yokumiswa, IEEE, njengengxenye yephrojekthi engu-802.11b. Kepha kubalulekile ukuqala ukuthola impendulo futhi uqiniseke ukuthi abasebenzisi namacala okusebenzisa ayalandelwa.
Omunye umthamo ochazwe ubhekisa kuwo Iziteshi ezingama-320 megahertz, ngakho-ke usayizi wesiteshi we-Wi-Fi 7 standard usuphindeke cishe kabili.
Ngokwethiyori, kuhloswe ukuthi kuphindwe kabili umthamo uma kuqhathaniswa nalokho esingakuthola namuhla ngeziteshi ezingama-megahertz eziyi-160 nayo yonke imisebenzi nayo ebhekwayo, futhi ethakazelisa kakhulu, yilokho okubizwa ngokuthi yi-multilink operation.
Ngakho-ke i-Wi-Fi 7 izoba nokusebenza ngokomqondo okungaphezulu kokuphindwe kahlanu kune-Wi-Fi 6. Kodwa-ke lezi yizinto onamaphoyinti okufinyelela namakhasimende akho, anenani eliphakeme lemifudlana futhi asebenza kulezo ziteshi ezingama-320 megahertz, okusebenzisa nokushintshashintsha kwezimo okuphezulu kakhulu, ngakho-ke lokho kuyethiyori.
Ngakho-ke uma sicabanga ngesimo esisebenzayo lapho sinamaphoyinti okufinyelela namakhasimende, futhi lapho amaklayenti ngokuvamile ethatha imifudlana emibili yendawo, futhi enezinhlobo ezihlukile, i-256 ne-1K noma i-4K, sisathola ama-bitrate ama-multi-gigabit lapho sisebenzisa iziteshi ezingama-320 megahertz okufanele utholakale kabanzi emifudlaneni yesikhala emibili.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Wi-Fi 7 isondela futhi isondela futhi i-Intel isho ukuthi izobaluleka